VPN (Virtual Private Network) ဆိုတာဘာလဲ? | Zeagwat, Inc.
VPN (Virtual Private Network) ဆိုတာဘာလဲ?
Related: တရုတ်ပြည်ရဲ့ Great Firewall ကိုအဏာသိမ်းအစိုးရက အသုံးပြုခဲ့ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ?
VPN ဆိုတာ ကွန်ပျူတာကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူတို့သည် မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်း အချက်အလက်များကို လုံခြုံသောကွန်ယက် ဖြစ်အောင်ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Internet ရဲ့ကြားခံပစ္စည်း တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Private Network တွေကြားမှာရှိတဲ့ Virtual Connection ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Private ဆိုသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ Data တွေကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် လိုရာအရပ်ကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ Service (or) Technology တစ်ခုပေါ့။ VPN ကမိမိတို့ရဲ့ Information တွေကို encrypt လုပ်ပြီး သော့ခေတ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
VPN ကိုသုံးပြီးကိုယ့်ရဲ့ privacy ကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ? VPN ရဲ့အားသာချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
VPN နည်းပညာဆိုတာ Internet Service Provider (ISP)ကျော်ြပီး လုံခြုံမှုရှိတဲ့ network connection ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာပါ၊
VPN ကိုချိတ်ဆက်လျှင် မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့နိုင်ငံရဲ့ IP Address ကိုထည့်ပြီး အလွယ်တကူ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒါ့အပြင်VPNကိုကြိုက်တဲ့နေရာကနေ မိမိတို့ Dataတွေကို Remote Access လှမ်း၀င်လို့ရပါတယ်။
ခုခေတ်မှာ VPNကိုအမြောက်အမြားသုံးလာကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မိမိတို့ internet ပေါ်၀င်ကြည့်တာတွေမှန်သမျှကို ISP ကနေ Tracking မလုပ်နိုင်အောင် VPN ကကူညီပေးတာကြောင့်ပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ VPN ကိုသုံးခြင်းဖြင့် မိမိနိုင်ငံတွင် Access/Download လုပ်၍မရသော Applications /Game တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိနိုင်ငံမှ ၀င်ကြည့်၍မရသော blocking website တွေကို VPN ကိုသုံးပြီး၀င်ကြည့်လို့ရပါသည်။ ဥပမာ -ပြောရရင် တရုတ်နိုင်ငံမှာ Facebook သုံးခြင်းကို ကန့်သတ်ထားပါတယ် အကယ်၍ သင်သာ Facebook သုံးချင်တယ်ဆိုရင် VPN နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကိုယ့်Computerကနေထုတ်လွှတ်တဲ့Data တွေကိုအင်တာနက်ထဲမှာ ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ တခြားသူတစ်ယောက် (သို့) အဖွဲ့အစည်းကနေကြားဖြတ်ဖမ်းယူကြည့်ရှု့လို့မရအောင် Data တွေကို VPN server တွေကနေ Encrypt လုပ်ပြီး အင်တာနက်ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှုားမှုကို လုံခြုံစေအောင် စီမံခန့်ခွဲပေးပါ တယ်။ လုံခြုံမှု့မြင့်မားတဲ့ VPNတွေမှာဆိုရင် ကိုယ့်Internet ထဲမှာBrowsing history တွေကိုတောင် Record လုပ်ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ဆိုလိုသည့်သဘောက အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP address တွေရှိပြီး ISP, Web Browsers, Websites အစရှိတာတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ VPN ကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခြေရာခံလို့မရအောင် ကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်က VPN ကိုအသုံးမပြုထားရင်တော့ သင့်ရဲ့ Data တွေကို ISP (Internet Service Provider) ကနေပြီးတော့ Tracking လုပ်နိုင်နေဦးမှာပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး VPN ရဲ့အရေးပါပုံကိုသိရှိနိုင် မှာပါ။
Organization တခုကို securityကောင်းကောင်းနဲ့စျေးသက်သာပြီးNetwork connectivity ကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Public Network Infrastructure တွေ အတွင်းမှာ Private Network အချင်းချင်း Network connectivity ရအောင် အသုံးပြုတဲ့ Protocol တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် company လုပ်ငန်းတွေမှာ VPN ကိုsecure ကျကျ၊ စရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Internet ကို အခြားသော ကွန်ယက်တွေနဲ့ လုံခြုံတဲ့ connection ရအောင်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့ IP Address သင့်ရဲ့ Location ကို Hide ချင်ရင် VPN ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ မိမိ Organization အတွက် Online Privacy တစ်ခုလိုမျိုးပေါ့။
အကယ်၍ သင် VPN ချိတ်ဆက်ထားခဲ့မည့်ဆိုပါက သင်လိုင်းပေါ်မှာ Browse လုပ်ထားတဲ့ Website တွေ၊ သင့်ရဲ့ အမှန်တကယ် IP Address တွေကိုမည်သူမှသိနိုင်မည်မဟုပါ။
Free VPN လည်းရှိပါတယ်။ Free VPN ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Connection တွေကပုံမှန်ထက်နှေးသွားမှာပါ။
Paid VPN ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ quality နှင့် internet ချိတ်ဆက်ရာတွင်လျှင်မြန်မှု ပေးနိုင်မယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ Personal data တွေကိုလည်း လုံခြုံမှုပိုရှိမယ်ဆိုတာ သေချာပါသည်။
အသုံးများတဲ့ Best Free VPN link တွေကိုတော့အောက်မှာဖော်ြပတားပါတယ်…………..